‘उद्योग वाणिज्य महासंघले साना व्यवसायीलाई हेपिरहेकाे छ, अब हामी प्रतिकार गर्छाैं’ - किरण डंगोल अध्यक्ष, नेपाल हाते कागज व्यवसायी संघ
जनतापाटी बुधवार, मंसिर ३, २०७७, १४:४२:०० मा प्रकाशित
कोरोना महामारीले नेपालको हाते कागज उद्योगमा कत्तिको प्रभाव पारिरहेको छ ?
-निकै प्रभाव पारेको छ । देश भित्रको बजार त ठिकै छ, खासै घटेको छैन । विदेशको बजार भने निकै घटेको छ । हाते कागजको कूल बजार मध्ये युरोप अमेरिका ६० प्रतिशत हो भने नेपाली बजार करिव ४० प्रतिशत हो । युरोप अमेरिकामा कोरोना महामारी उच्च भएकोले त्यहां समान पठाउनै सकिएको छैन । त्यसले गर्दा हाते कागज व्यवसायीलाई निकै समस्या परिरहेको छ । तर, हाम्रो लागि कोरोना भन्दा पनि सरकारी नीति नै मुख्य समस्या बनिरहेको छ ।
सरकारको कुन नीतिले समस्या पारेको छ ?
-सरकार एकातर्फ हाते कागजलाई घरेलु उद्योग मानेर पान मात्रै दर्ता भए हुन्छ, भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन भन्छ । अर्काेतर्फ एकपटकमा १५ हजार भन्दा माथिको कारोवार गर्दा भ्याट विल काट्नै पर्ने प्रावधान अनिवार्य गरेको छ । त्यसले गर्दा अलि ठूलो परिमाण कागज खरिद गर्न चाहानेहरुलाई भ्याट विल दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकी सरकारको नीतिकै कारण अधिकाशं हाते कागज उद्यमीहरु पानमा मात्रै दर्ता छन्, भ्याटमा दर्ता छैनन् । कारोवारको मात्रा पनि ठूलो नभएको र सरकारले नै तपाईहरुले त पानबाटै कारोबार गरे हुन्छ भनेकोले पनि व्यवसायी भ्याटमा गएका छैनन् । तर, त्यहीकारण कारोवारको भोलुममा समस्या भएको छ । सरकारले भ्याट छुट दिने हो भने स्पष्टसंग दिनु पर्छ । एकातर्फबाट सुविधा दिएझैं गर्ने र अर्काेतर्फबाट कारोवार विस्तार हुनै नदिने नीति लिंदा देशभरका व्यवसायीलाई समस्या भैरहेको छ । हामीले यो समस्या समाधानको लागि धेरै पटक पहल गर्यौं । तर, सरकारले पटक्कै सुनिरहेको छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरु मार्फत कुरा उठाउने हो भने त सरकारले कुरा सुन्न वाध्य हुन्थ्यो होला नी ?
-महासंघले हाम्रो कुरा कहिल्यै सुन्दैन । महासंघ मात्र होइन, कुनै पनि संघ संस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीको कुरा सुन्दैनन् । सरकारले पनि पहुंचवालाको मात्रै कुरा सुन्ने हो ।
अहिले महासंघमा निर्वाचन आइरहेको छ, यस्तो बेलामा कुरा उठाउने हो भने पदाधिकारीहरुले सुन्लान नी ?
-महासंघले विगतको तुलनामा अलि अलि कुरा सुनेको जस्तो गर्न थालेको छ । तर, त्यो देखावटी खालको मात्र छ । मेड इन नेपाललाई प्रमोशन गर्ने भनेको छ, तर त्यो अति नै सिमित मात्रामा गरिएको छ । महासंघमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरु जहिले पनि ओझेलमा छन् । हामीलाई हेपिएको छ । अब हामीले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं ।
के प्रयास गरिरहनु भएको छ ?
-यसपटकको निर्वाचनमा हामीले यो गुट, त्यो गुट भन्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरु को को उम्मेद्वार छन्, सकेसम्म तिनीहरुलाई जिताउने प्रयास गरिरहेका छौं । ठूला उद्यमी व्यवसायीले हाम्रो समस्या सुन्दैनन्, हाम्रो कुरा सुनाउनको लागि हामी जस्तै साना तथा मझौला उद्यमीहरु महासंघको नेतृत्वमा पुग्नु पर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । त्यसैले तपाईले चन्द्र ढकाल कि भोट दिने कि किशोर प्रधानलाई भनेर नसोध्नुस् ।
त्यो वाहेक अरु उम्मेद्वार नै छैनन् त, कस्लाई दिनुहुन्छ त ?
-मैले भने नी हाम्रो लागि यी दुईवटा समुह भन्दा पनि आफ्नै अर्थात् साना तथा मझौला उद्यमीहरु को को चुनाव लड्दैछन् र उनीहरुलाई कसरी जिताउने भन्ने ठूलो कुरा हो । हामी त्यही पहल गरिरहेका छौं ।
अन्ततः पोखरा विश्वविद्यालयको विवाद मिल्यो, डि प्लस आएका विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन नहुने आइतवार, बैशाख ८, २०७६, १३:१३:००
६४ वर्षपछि उचाइ नाप्न सगरमाथाकाे टुप्पाेमा जाँदै सरकारी टाेली बुधवार, चैत्र २७, २०७५, ०७:१६:००
श्रीलंकाका टेस्ट कप्तान करुणारत्ने मापसेमा परी पक्राउ आइतवार, चैत्र १७, २०७५, १४:४६:००